राधी विद्युत् कम्पनीले १०% लाभांश अनुमोदन सहितका प्रस्तावहरु राखेर डाक्यो साधारण सभा ,को को छन् लाभांस पाउने? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
राधी विद्युत् कम्पनीले १०% लाभांश अनुमोदन सहितका प्रस्तावहरु राखेर डाक्यो साधारण सभा ,को को छन् लाभांस पाउने?
काठमाडौं । राधी विद्युत् कम्पनीले १०% लाभांश अनुमोदन सहितका प्रस्तावहरु राखेर साधारण सभा डोकेको छ । कम्पनीले आइतबार (असार २९ गते) साधारण सभा डाकेको हो । सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले असार ९ गते सोमबारदेखि २२ सम्म बुक क्लोज गरेको छ ।
राधीको गत जेठ २७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लगानीकर्तालाई ५% बोनस सेयर र ५% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित लाभांश साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । असार ८ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् । राधीले गत वर्ष पनि ५% बोनस र ५% नगद गरी कुल १०% नै लाभांश दिएको थियो ।
सञ्चालक समिति अध्यक्षले पेश गर्ने आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवदेनमा छलफल, लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका एजेन्डा पनि राखिएका छन् ।
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ४ करोड ७२ लाख ३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । चैत मसान्तसम्म राधीको प्रतिसेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ९६ पैसा छ । यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४५ करोड १० लाख रुपैयाँ छ ।